कसरी Kabaşiş लेख्ने? यो के हो? Tdk - How Writing.Info
कसरी Kabashish लेख्न
Kabaşiş शुद्ध हिज्जे
विशेष गरी युवाहरूलाई अहिले धेरै शब्दहरूको सही हिज्जे थाहा छैन। चाहे व्याख्याताहरूले उनीहरूले गरेको गलत काम देखाउँछन् वा यसलाई सुधार गर्न को लागी प्रयास गर्दछन्, चरम प्राविधिक र वातावरणीय कारकहरूले उनीहरूसँग उन्मुख भएका छन् जसले छोटो समयमा उनीहरूको शिक्षालाई बिर्सन्छन्, त्यसैले बारम्बार दोहोर्याउँदा र उनीहरूले सिकेका कुराहरूलाई बल दिनु महत्वपूर्ण हुन्छ।
कसरी लेख्ने, कसरी लेख्ने भन्ने नाराका साथ स्थापना गरिएको, हाम्रो वेबसाइटको एक मात्र उद्देश्य हाम्रो युवा व्यक्तिहरू हाम्रो भाषा प्रयोग गर्दा सही छन् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नु हो र तिनीहरूको परीक्षामा गलत हिज्जे मुद्दाहरूको समर्थन गर्दछ। हिज्जे गल्तीहरू धेरै बढि बनाइन्छ, विशेष गरी केहि शब्दहरूमा। अक्सर गल्तीहरू गलत, एक्लो, आश्चर्य, चकित, -de र -ki को संयोजनको प्रयोगमा गरिन्छ। वेब ठेगानाको खोजी बाकस प्रयोग गरेर शब्दहरूको सही हिज्जेको बारेमा तपाईसँग एउटा विचार छ।
काबाशिशको अर्थ के हो?
कसरी Kabaşiş लेख्ने?
Kabashiş हिज्जे गाइड
थोपाउन सक्षम हुनुहोस्
संघर्ष गर्न सक्षम हुनुहोस्